Horror Kupera muAfghanistan neKabul yakakomberedzwa neTaliban
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Horror Kupera muAfghanistan neKabul yakakomberedzwa neTaliban
Afghanistan Kuputsa Nhau • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mutungamiri weAfghanistan ari kutaurirana kutora zvine runyararo naTaliban
Ndege yeAir India iri kumhara paKabul International Airport mukuyedza kubatsira vamwe vemuIndia Citizen kutiza Taliban Terror. Ndege iri pasi. Kana ichigona kusimuka zvakare iri pachena.
Tt zvapera. Nhaurirano dzakasvika pamhedziso ine musoro. Shanduko isina simba yesimba iri kutora nzvimbo negadziriro iripo.
Dzimwe nhau kana kutyisa uye nyonganiso zviri kuuya kubva kuAfghanistan neyechipiri.
Ko Turkey ichadzivirira uye kudzora airport y Kabul, sekutaurwa kwazvakaitwa nehurumende yeTurkey kana kuti vari kuisiya kumaTaliban ??
VaTaliban nehurumende yeAfghan vari muhurukuro dze 'shanduko yerunyararo yemasimba', vanodaro masangano enhau
Dzvanya pano kuti uverenge kupera kwakaita Svondo ino ine taliban Fighters kutora Kabul neAfghanistan Presidential Palace
eTurboNews iri kutumira pfupiso yezvinhu zvenhau uye zvemagariro midhiya kubva maminetsi makumi matatu apfuura. Zvinyorwa hazvigadziriswe uye penda mufananidzo wakashata nezve izvo zviri kuitika muAfghanistan parizvino.
Kabul nevamwe veAfghanistan vanofungidzirwa kudonha gare gare nhasi neSvondo, Nyamavhuvhu 15, 2021
Sezvo iyo US neNATO vari kuenda kure neAfghanistan, mauto eTaliban anogona kutora nyore nyore iyo yose Afghanistan. UN iripi? Variko here?
Zvandakaona nzvimbo dzinoverengeka dzakatenderedza guta reKabul: kutya kukuru kunokonzerwa nevanhu vane mota dzakapakata zvombo vachirasa shit, kumhanyisa, kunyangwe varindi vekupfura vachitenderera pamigwagwa yekutenderera kuti vabvise kuwanda kwemotokari. Panguva ino hapana chinoratidza Taliban mukati meguta. VaTaliban vakati havapinde.
A taliban Fighter Anokotamira pamberi paMasimbaose Allah (swt) kuratidza kutenda / kuonga muKabul. #Cabul #KabulHasFallen #Taliban pic.twitter.com/wmSCgXXnX2
“Hativerengi nekuti tinobva kuAfghanistan. Tichafa zvishoma nezvishoma munhoroondo ”Misodzi yemusikana asina tariro weAfghan uyo ramangwana rake riri kuvhiringidzika kufambira mberi kweTaliban munyika. Mwoyo wangu unotyora vakadzi veAfghanistan. Nyika yakundikana kwavari. Nhoroondo ichanyora izvi.
Mauto mazana mashanu eU.S. ari kuendeswa kunzvimbo dzinotyisa dzimwe dzacho dzaitove muKuwait uye dzakatumirwa kune dzimwe nzvimbo dzekusiya uye dziri kudzorerwa mukati kuzodzivirira Kabul etc.
China yakagadzirira kuziva maTaliban sehurumende ye Afuganisitani.
Taliban mukati Kabul vakaramba nhepfenyuro yenhau nezveMullah Baradar Akhund achiuya kuzotora masimba mukati Kabul.
Ngatitarisirei kuti vanovhurazve Kabul Airport zvakare munguva pfupi. Kabul inhandare ine hutsinye kumhara uye kusimuka kubva (kupisa, kukwirira, makomo), ndege dzichange dzichiuya dzinorema sezvo refueling is not guaranteed, ATC ichange ichishandirwa nekumanikidzwa nekuda kwedzimwe ndege. Iyo yekuchengetedza margin yakanyanya kuderera.
Kuburitsa nhau Kabul yakakomberedza maUS Chinooks achibvisa vanhu sezvatinotaura.
Vateresi veUS vakadonhedza Mabhiriyoni angangosvika mabhirioni pamusoro pehondo iri Afuganisitani kungoitira kuti ibude mukati memwedzi yakati wandei mushure mekunge isu mauto tasiya.
Saka pakupedzisira #Cabul yakadzokera kune varidzi chaivo. Allah ndiAl-Haq
Chinetso chega chevaTaliban ndechekudzora danho ravo repasi, pavakatanga kutonga. Taliban yakaratidza izvi kashoma, asi munguva dzerunyararo, kuraira uku kwaizove nemasimba mazhinji - kwete kungodhonza kana kusadhonza chinokonzeresa.
Vanhu vakakodzera kutonga varikutorera zvavo. USA, INDIA, ISRAEL kuwa kwako kwaswedera zvakare!
Sekureva kweshumo, Mutungamiri weAfghan Ashraf Ghani akagadzirira kutiza Afghanistan۔
Varwi veTaliban vari "kuenda pasuo nesuo" kutenderera vasikana vadiki kuti vave "varanda vebonde" kune varwi muboka rinotyisa, inodaro.
Wow! Tom Tugenhadt anoti UK yakakwidza kumahofisi edu ekumadokero neEU kuti vawedzere rutsigiro mu Afuganisitani Kutevera kubuditswa kwaBiden, hapana akasimuka: arikupi misoro yenyaya !!!!
Meseji kubva kuEthiopiya iri nyore- Isu, serudzi, hatina kuzvarwa zuro. Hatidi kuve imwe Libya, Yemen kana Afuganisitani. Kupindira kwevanhu kune kure nezvamunoti ndizvo.
Sangano remukati rinoratidza kuti vatungamiriri veTaliban vari kuyedza kupamba nekumanikidza kuroora vakadzi mushure mekunge vatungamiriri vemunharaunda muAfghanistan vakumbirwa kuti vape runyorwa rwevane makore gumi nemaviri kusvika makumi mana nemashanu mwedzi wapera.
#Taliban inogona kurega kuita zvechisimba panguva ino yekutonga, kumwe kuchinjika kunogona kutarisirwa pavangangoda mvumo yepasirese yekusimudzira hurumende itsva.
Afghanistan: Taliban inopinda kunze kwe Kabul - sehurumende yeAfghan inovimbisa shanduko yerunyararo yesimba | World News | Sky News
Zvakanaka kuziva kuti as Kabul kudonha, embassy yedu iri kupisa, uye maherikoputa anodikanwa kutamisa vanhu vedu.
Air India inomhara muKabul kuti ibudise maIndia Citizen. Vachakwanisa here?
Mutungamiri Ghani vari kusiya basa nhasi. Mulla Abdul Ghani Baradar, mutungamiri weTaliban uye aimbova gurukota rezvekunze reIslam Emirates, kutora chinzvimbo semutungamiri wepamberi we #Afganistan mumuzinda wamutungamiri wenyika, #Kabul.
Mamwe masosi anoti Taliban haizorwisi Kabul, sezvo shanduko yehurumende iri kuitika. #AfghanistanKupisa
Mhepo India A320. Ikozvino yave kuburukira ku #Cabul
Mazuva mashoma kumashure US akafanotaura kudonha kwe Kabul mumazuva makumi mapfumbamwe. Iri Rangeela Ghani Army rakatadza kana kuramba kwemaawa makumi mapfumbamwe.
Afghan govt, miromo mikuru asi zero ushingi uye chiremerera. pachinzvimbo chekurwira nyika yavo, ivo vari kumhanyira hupoteri Chokwadi hachina kumbova nyika yavo, iyo govt yakagadzirwa neU.SA., yakanga isiri yechokwadi Afgan govt.
Varwi veTaliban vapinda kumucheto kweguta guru reAfghan Kabul mushure mekutapa guta reJalalabad pasina kurwa, vakuru munyika vanoti.
Zviitiko zvinoshamisa pa @AJEnglish.
Kutsiga kutenderera maherikoputa achiuya uye achipfuura kubva #US mumiriri.
Kuwa kwe #Cabul zvinogona kunge zvichiitika izvozvi. Mishumo yakawanda #Taliban zvinhu mukati meguta, asiwo izwi rehutungamiriri rakaraira varwi kuti vamire pamuganhu weguta.#Afuganisitani pic.twitter.com/oLFUvhKek8
America ichave yekutanga kana isiri Pakistan neChina kugamuchira hurumende yeTaliban. Nzanga inotungamirwa nevanhurume yakaita chinzvimbo chikuru kuti maTaliban adzokere kuAfghanistan pasina kurwa. Usatombotenda zvavanotaura uye nezvavanoita. Its shariya in Kabul zvino!
Taliban nhanho kuenda kunotora Afghanistan
RIP Afghan Mauto !! Mwari ngaaponese mugari asina mhosva